Madaxweynaha Faransiiska oo ka digay halista Ururka Daacish | Universal Somali TV
Madaxweynaha Faransiiska, Emmanuel Macron ayaa sheegay in ururka isugu yeeray Dowladda Islaamka (IS) uu weli yahay halis jirta, ka dib weerarkii 170 qof lagu dilay ee Khamiistii ka dhacay Magaalada Kabul ee dalka Afghanistan.
Madaxweynaha Faransiiska oo booqasho ku joogga Magaalada Baqdaad ee dalka Ciraaq ayaa ka digay in lees dhigto, isagoona xusay inay muhiim tahay in la feejignaado.
Madaxweyne Macron oo ka barbar hadlayay Ra'iisal Wasaaraha Ciraaq, Mustafa al-Kadhimi ayaa tilmaamay in Faransiiska iyo bahwadaagtiisa ay garab taagan yihiin Xukuumadda Baqdaad, oo dagaal kula jirta kooxaha argagixisada.
"Waxaan dhammaan ognahay sida ay muhiimka u tahay inaan sii xoojino feejignaantayna, waayo Daacish weli waa khatar taagan. Waxaan ognahay in Dowladda Ciraaq ay weli muhiimadda 1aad siinayso la dagaalanka kooxaha argagixisada. Waxaan kuu xaqiijinayaa in Faransiiska iyo xulafadiisa kale ay garab taagan yihiin Ciraaq." Ayuu yiri Madaxweyne Macron.
IS-ta Khorasan ayaa Khamiistii qarax ismiidaamin iyo rasaasba ku dishay 170 qof, oo ka mid ahaa dad ku sugnaa afaafka hore ee Garoonka Diyaaradaha Kabul.
Kan-xigaDaad-gureynta ka socoto Garoonka Kabu...
Kan-horeTaliban oo la wareegtay hub fara-bada...
Dhowr arrimood oo sababay burburka Militarigii Afghanistan
62,036,193 unique visits